Alaab-Soo-saareyaasha Lupinus Albus, Soosaarayaal, Dhoofiyeyaal ka socda Bolise
Soosaarida Lupinus Albus
[Magaca Latin] Lupinus Albus L.
[Qayb la isticmaalay] Digir
[Qeexitaanka] 8% Lupeol
[Waxyaabaha firfircoon] Lupeol
1. si ballaadhan loogu isticmaalo rootida iyo alaabada baastada ah. Waxay kobcin kartaa midabka halkii ukunta iyo subagga
2. loo isticmaalay badarka, cuntada degdega ah, cuntada ilmaha, maraqa iyo saladhka
3. waxaa loo isticmaali karaa daaweynta cambaarta joogtada ah
4. ficilka ka hortagga qoyaan la'aanta iyo dhiirrigelinta kala duwanaanta keratinocyte, sidaas darteed sidoo kale waa walxo wanaagsan oo loogu talagalay qurxinta
1. Waxaa lagu dabaqay goobta cuntada, waa nooc nafaqo leh oo faa iidooyin badan u leh maskaxda;
2. Waxaa lagu dabaqayaa qaybta dawooyinka, waxaa loo isticmaali karaa in lagu daaweeyo cudurada halbawlayaasha wadnaha waxayna leedahay saameyn fiican
3. Waxaa lagu dabaqayaa goobta la isku qurxiyo, waxay leedahay howsha kala daadinta jirka, duudsinta lidka, iyo firfircoonida unugyada maqaarka.
Ku saabsan Lupinus Albus Extract
Lupinus albus waa xubin ka tirsan qoyska Fabaceae. Sida dhir dabiici ah ama la beeray, Lupinus albus waxaa loo qaybiyaa Yurub, Balkans iyo Turkiga, gaar ahaan gobollada Marmara iyo Aegean. Lupine waa dhir nafaqo leh oo ka hortagta cudurka macaanka.
Daraasaddan, saamaynta miraha Lupinus albus ee ku saabsan malondialdehyde (MDA), glutathione (GSH) oo hoos u dhacday, borotiinka guud, fiitamiinnada ADEK, iyo qiyamka kolestaroolka, kuwaas oo ah tilmaamayaasha waxyeellada oksaydhka iyo difaaca antioxidant.